Ku socota qofka tagaya kulanka guddiga arrimaha ajaaniibta - Utlendingsnemnda (UNE)
Warbixintii ugu danbaysay: 13/12/202113/12/2021
Ku socota qofka tagaya kulanka guddiga arrimaha ajaaniibta
Ku soo dhawow guddiga arrimaha ajnebiga.
Ku soo dhawow guddiga arrimaha ajnebiga. Markaad ka cabanayso go'aan ay UDI-du gaartay, ayaa dacwaddaada na loo soo diraa si mar kale dib loogu qiimeeyo.
Mararka qaarkood ayaannu u baahannaa warbixin dheeraada oo adiga kugu saabsan. Markaas ayaannu kuugu yeereynaa kulan guddi, taasoo fursad kuu siinaysa in aad ka sii warrantid dacwaddaada.
Sida badan waxaa uu guddiga arrimaha ajnebigu ka baaraandegaa dacwooyinka la xiriira ilaalinta iyo magangelinta. Inkastoo taasi jirto haddana kulanka guddigu xaggayaga ma aha waraysi magangelyo oo cusub. Hadda ujeeddadu waa in la sii caddeeyo su’aalo aan laga jawaabin. Sidaa awgeed waxaa muhiim ah inaad uga faa’iideysatid fursaddaan inaad runta sheegtid iyo ka warbixinta dacwaddaada sida ugu wanaagsan ee suuragal ah.
Dhawr qof ayaa joogi doona kulanka guddiga.
Haddii aad qareen leedahay waxaa uu fadhin doonaa dhinacaaga. Qareenku waxaa uu hubinayaa in xuquuqdaada la ilaaliyo.
Dhinaca kale ee miiska waxaa jooga guddoomiyaha guddiga. Guddoomiyaha guddigu waa garyaqaan, oo waxaa uu leeyahay aqoon xaakim.
Guddoomiyaha guddiga ayaa hoggaaminaya kulanka, ayadoo ay la jiraan labo xubnood oo ka tirsan guddiga. Saadexdooda ayaa ah guddiga ayagaana go'aaminaya dacwaddaada. Go'aanka ay qaadan doonaan waxa uu ugu horrayn ku salaysnaan doonaa wixii aad adigu horay u sheegtay, iyo waxa ka soo baxa kulanka guddiga.
Dacwad-hayuhu waa qof u diyaarinaya dacwaddaada guddiga, laakiin wax lug ah kuma laha go'aaminta dacwada. Inkastoo taasi jirtana way kaaga imaan kartaa su'aali dacwad-hayaha waqtiga kulanka guddiga.
Mararka qaarkood waxaa goobta kulanka guddiga joogi kara lataliye-daleed oo ka socda waaxda akhbaarta dalalka (Landinfo). Lataliye-daleedku waxaa uu aqoon fiican u leeyahay dalka aad ka soo jeeddo, waxaase kaliya oo uu si guud wax uga sheegi karaa xaaladda meesha aad ka timid.
Waxaa sidoo kale joogi doona kulanka turjumaan. Turjumaanku waxaa uu tarjumayaa wixii laysku yiraahdo oo dhan, waxaana aqoonsaday oo tayadiisa hubiyey UDI-da. Taasoo macneheedu yahay in turjumaanka, sida dhammaan dadka kale ee jooga kulanka guddiga, uu saaran yahay waajibka sir- ilaalintu.
Waa lagu ciqaabi karaa haddii dadka ka qaybqaatay kulanku ay arrinta sir-ilaalinta jebiyaan. Sidaas darteed waad u warrami kartaa kulanka adigoon ka baqayn in dad kale ogaadaan waxa aad sheegtay.
Waxa ugu horreeya ee ka dhaca kulanka guddigu waa in guddoomiyaha guddigu uu soo bandhigo ka- qayb-galayaasha kulanka iyo waxa dhici doona. Markaan waxaa lagu weydiin doonaa su'aalo, oo waxaad fursad u heli doontaa in aad ka warranto mawduucyada ay guddigu su'aalo ka qabaan. Su'aaluhu waxay ku saabsanaan karaan aqoonsigaaga, waxaad ahaan jirtay, reerkaaga iyo waxyaabihii kugu soo dhacay dalkaaga.
Hadda waxaa lagama maarmaan ah in warbxinta aad bixinaysaa ay sax tahay. Xusuusnow in lagugu ciqaabi karo haddii aad sheegtid warbixin aad ogtahay inaanay sax ahayn.
Kulanka guddigu waxa uu qaadan karaa maalinta oo dhan, laakiin waxaa mar walba la qaataa dhawr nasasho.
Dhammaadka kulanka ayaa qareenkaagu soo jeedin doonaa khudbad gabagabo ah oo kooban. Waad qaadan kartaa kalmadda ugu danbaysa. Tani waa fusadda ugu dambaysa ee aad adiga iyo qareenkaagu u haysataan in aad la hadashaan guddiga.
Markii kulanka la gabagabeeyo ayuu dacwad-hayuhu soo koobi doonaa wixii ka soo baxay kulanka.
Markuu dacwad-hayuhu qolka ka baxo, ayaa guddoomiyaha iyo labada xubnood ee guddigu isla qaadanayaan go'aanka ugu dambeeya ee dacwada. Hadda waxay qaadataa sida caadiga ah ilaa saddex toddobaad inta lagaaga sheegayo go'aanka.
Qoraalka go'aanka waxaa loo dirayaa qareenkaaga ama adigaa toos laguugu soo dirayaa haddii aadan qareen lahayn.
Ka sii akhriso waxyaabo ku saabsan kulanka guddiga UNE.no
Waxaad xaq u leedahay in aad kulanka u soo wadato qareen ama wakiil kale
Haddii aadan qareen lahayn, urur ayaad la xiriiri kartaa oo caawin weydiisan kartaa. Ururrada noocan ah waxaa tusaale ahaan ka mid ah:
Ururka norwiijiga ee magangelyadoonayaasha (NOAS)
Is-caawinta soo-galootiga iyo qaxootiga (SEIF)
La-talinta arrimaha sharciga ee dumarka (JURK)
U soo diyaargaroow mawduuca kulanka
Mawduuca kulanku wuxuu noqon karaa kiiska oo dhan. Laakiin wuxuu sidoo kale noqon karaa qayb kiiska ka mid ah oo keliya, annaga oo taas horay kuugu soo sheegi doonna. Had iyo jeer soo akhriso go’aankii u danbeeyay ee lagaa gaaray, oo la hadal wakiilkaaga.
Khalad ama is-fahamdarro ma ku jiraan kiiska?
Haddii aad aamminsan tahay in ay khalad iyo is-fahamdarro kiiska ku jiraan, waa in aad noo sheegtaa. Waxay tusaale ahaan kuwaasi ku jiri karaan wareysigii magangelyada ama go’aankii UDI-da. Uma baahnid in aad noo sheegto waxa ku qoran cabashada, maxaa yeelay taas horay ayaannu u soo akhrisannay.
Ogow dhammaan dadka jooga kulanka guddiga arrimaha ajaaniibta waxaa saaran waajib xog qarin
Dhammaan dadka jooga kulanka guddiga arrimaha ajaaniibta waxaa saaran waajib xog qarin. Taas oo micnaheedu yahay in aan loo oggolayn in ay kiiskaaga meelo kale uga hadlaan. Sidaas darteedna si xor ah ayaad u hadli kartaa. Kulanka albaabbadu waa u xiran yihiin, oo qof aan shaqo ku lahayn ma ogaanayo waxa meesha ka dhacaya.
Haddii aad haysid warbixin cusub oo kiiska ku saabsan, waa in aad kulanka ka hor soo gudbisaa
Haddii aad haysid warbixin cusub, ama doonaysid in aad dukumiinti dhiibtid, waa in adiga ama wakiilkaadu aad kuwaas noo soo dirtaan wakhti fiican kulanka ka hor. Waxay taasi muhiim u tahay sidii uu guddigu si wanaagsan ugu diyaargaroobi lahaa.
Waa in aan helnaa dukumiinta aqoonsigaaga caddaynaya
Inta badan aqoonsiga qofka ayaa kulankaan ah mawduuc muhiim ah. Haddii aad haysid, ama aad dalkaagi ka keeni kartid baasabboor ama dukumiinti aqoonsi oo kale, waa in aad kuwaas noo soo dirtaa wakhti fiican kulanka ka hor. Dukumiintiyada waxaa loo baahan yahay in ay orijinaal ahaadaan. Aqoonsigu waa warbixinno badan oo marka laysu geeyo sheegaya qofka aad tahay. Warbixinnada noocan ah waxaa tusaale ahaan ka mid ah magacaaga, taariikhda dhalashada, waalidkaa iyo meesha aad ku dhalatay. Haddii aadan haynin dukumiinti muujinaya waxyaalahan oo idil, waxaa si kastaba muhiim ah in aad noo soo dirto waxa ugu badan ee aad heli karto.
Soo sheeg haddii aad baahi gaar ah qabto
Haddii aad u baahan tahay caawin khaas ah iyada oo ay sababtu tahay in aad qabto nooc curyaannimo ah, dhibaato caafimaad ama baahi kale oo khaas ah, waa in aad u soo sheegtaa sida ugu dhakhsaha badan ee suuraggalka ah.
Tillaabooyinka ka-hortagga cudurrada
Tillaabooyinka ka-hortagga cudurrada ee kale waxaa ka mid ah:
daawada bakteeriyada disha
inta kulanka guddigu socdo oo muraayado la kala dhex dhigo xubnaha guddiga iyo qofka cabashada qaatay/qareenka.
Haddii aad isku aragto calaamadaha cudurka covid-19, waa in aadan imaannin kulanka guddiga ilaa inta lagaa qaadayo tijaabo koroone oo cudurka lagaa waayayo islamarkaana ay xaaladdaada caafimaad ka noqonayso mid wanaagsan. Talooyinka heer qaran ee laamaha caafimaadka ayaa sidaas sheegaya. Warbixin intaan ka badan oo ku saabsan xeerarka iyo talooyinka jira waxaad ka helaysaa Helsenorge.no (waa bog kale).